Android3Marshmallow နှင့်အတူ LG G6.0 အတွက် Recovery and Root ရှိပြီးဖြစ်သည် Androidsis
Francisco Ruiz | | အန်းဒရွိုက် Recovery ကို, Android Root ပါ, LG
သငျသညျသူကိုအသုံးပြုသူများထဲကတစ်ခုလျှင် သင်၏ LG G3 ကို Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည် ဖြတ်. Androidsis ပေါ်မှာငါတို့ share တဲ့ပိုလန် firmware လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကယနေ့အောင်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောနည်းလမ်းရှိသည် Recovery and Root ကို LG G3 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်ဒယ် (သို့) D855 မော်ဒယ်လ်ကိုထည့်သွင်းပါ၊ ဤအရာအားလုံးကိုအမြဲတမ်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရန်မလိုပဲ။
ခွင့်ပြုချက်ရလိုလျှင်ယခုသင်သိပြီ အမြစ်က Android LG G3 အတွက် Android 6.0 Marshmallow ပါ ၀ င်သည် နှင့်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကို install လုပ်ပါ TWRPဤဗွီဒီယိုစာစောင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလက်လွတ်မခံရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆံပင်များနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များဖြင့်ရှင်းပြပါမည်။ သင်၏ LG G3 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ် D855 Root ရရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များအားလုံးကိုဝေမျှခြင်းအပြင်တစ်ဆင့်ချင်းအဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီပြုလုပ်ပါ။ Android 6.0 Marshmallow ပါ။
1 Android3Marshmallow တွင် LG G6.0 ကို Root လုပ်ရန်သတိရသင့်သည်
2 Android3Marshmallow ပါသော LG G6.0 တွင် Root ခွင့်ပြုချက်ရရန်အတွက်ဖိုင်များလိုအပ်သည်
3 LG G3 ကို Android 6.0 Marshmallow တွင် Root လုပ်ပြီး TWRP Recovery ကိုမည်သို့ Install လုပ်ရမည်နည်း
Android3Marshmallow တွင် LG G6.0 ကို Root လုပ်ရန်သတိရသင့်သည်
ပါမစ်ရဖို့ LG G3 ကို Android 6.0 Marshamallow ဖြင့် root လုပ်ပါ ပြုပြင်ထားသော TWRP Recovery ကိုပင် install လုပ်ပါ၊
LG G3 D855 မော်ဒယ်အားလုံးအတွက်သက်တမ်းရှိသည် နှင့်၎င်း၏လက်တင်အမေရိကန်မူကွဲ။
သာတရားဝင်သည် Android3Marshmallow ဗားရှင်းများတွင် LG G6.0 ကို root လုပ်ပါသော v30b နှင့် v30c.
developer ဆက်တင်မှ USB debugging ကိုဖွင့်ထားပါ။
ဘက်ထရီလုံလောက်စွာအားသွင်းပါ ၎င်းသည်၎င်း၏စုစုပေါင်းအားစိုက်ထုတ်မှု၏အနည်းဆုံး ၅၀% ဖြစ်ရန်အကြံပြုလိုသည်၁၀၀ x ၁၀၀ ၀ န်းကျင်တွင်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။
Android3Marshmallow ပါသော LG G6.0 တွင် Root ခွင့်ပြုချက်ရရန်အတွက်ဖိုင်များလိုအပ်သည်
မင်းလုပ်ရလိမ့်မယ် ဒီ compressed ဖိုင်ကို ZIP format နဲ့ download လုပ်ပါ ၎င်းရဲ့အတွင်းပိုင်းသိုမဟုတ်ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ထဲကဘယ်နေရာမှာမဆို unzip လုပ်ပါ LG G3 အမျိုးအစား D855 TWRP Recovery ကို install လုပ်ချင်ပြီး Root ခွင့်ပြုချက်တွေရချင်တယ်။
decompress လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖိုင်လေးခု၊ APK format နှစ်ဖိုင်နှင့် ZIP compressed format နှစ်ခုရှိသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုသူတို့လိုပဲထားခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ LG G3 model D855 ကို Android 6.0 Marshmallow တွင်အမြစ်တွယ်နေသည်.
LG G3 ကို Android 6.0 Marshmallow တွင် Root လုပ်ပြီး TWRP Recovery ကိုမည်သို့ Install လုပ်ရမည်နည်း
ကျနော်တို့ KingRoot APK ကို install လုပ်ပါ ငါတို့သည်ယာယီ Root ခွင့်ပြုချက်ရရန်က execute ။
Terminal ကို restart မလုပ်ပဲယာယီ Root ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသည်နှင့် ကျနော်တို့ချက်ချင်း AutoREC Marshmallow ၏ APK install လုပ်ပါ ကျနော်တို့က execute ။
AutoREC သည် SuperUser ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ကြောင်းအသိပေးချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါသည် AutoREC Marshmallow သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မူလ Recovery ကို Backup လုပ်ရန်စောင့်ဆိုင်းသည်.
Backup ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက် AutoREC Marshmallow ကိုယ်တိုင်မိတ္တူသည်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးလိမ့်မည် TWRP ကို ​​flash လုပ်ဖို့ဆိုရင် Android M logo ကိုတို့ထိရမယ်.
TWRP Recovery မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုအပြီးသတ်ပြီးသည်အထိစောင့်ဆိုင်းပြီးလုပ်ငန်းအကြောင်းကြားစာကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားသောအခါ terminal ကိုအသစ်စက်စက် TWRP Recovery တွင်အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် OK ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Recovery မှကျွန်ုပ်တို့သည် option ကိုနှိပ်ပါ Install y ကျနော်တို့ Permissive zip flash ။
ပြီးရင် System ကို Reboot လုပ်ပါ။
Google Play စတိုးကိုဖွင့်တယ် SuperSU ကို download လုပ်တယ် ငါတို့ဖွင့်လို့မရဘူး.
ကျနော်တို့ Recovery Mode ကိုနောက်တဖန်ပြန်လည်ပါ၎င်းတို့အတွက် terminal ကိုလုံးဝပိတ်ပြီးပါဝါခုန်နှုန်းလျော့သော volume ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်သည်။ LG logo ပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ခလုတ်နှစ်ခုကိုလွှတ်လိုက်ပြီးတစ်ချိန်တည်းထပ်မံနှိပ်လိုက်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Modified Recovery မှကျွန်ုပ်တို့သည် option သို့ပြန်သွားသည် Install နှင့်ဤအချိန်ကျွန်တော်၏နာမဖြင့်သမုတ်သော ZIP format နဲ့ compressed ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ Beta Supersu.
ပြီးရင် System ကို Reboot လုပ်ပါ ယခုအခါ LG G3 model D855 ကိုတရားဝင် Android Android 6.0 Marsmallow ဖြင့် Root and Recovery ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ခံစားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » Android3Marshmallow ပါသော LG G6.0 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Recovery and Root ရှိသည်
အန်တိုနီယို OS ဟုသူကပြောသည်
ယခင်ဗားရှင်း (၅.၀?) မှ marshmallow သို့သွားရန်တရားဝင်ပါသလား။
Antonio OS သို့ပြန်သွားပါ
Jose Enrique Benitez Barrera ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါခင်ဗျားပြောတာကိုလုပ်ပြီးပြီ။ ငါ LG Logo ထဲကိုငါဖွင့်တိုင်းအဲဒီလိုဖမ်းမိတာကိုတွေ့ရတယ်။ အခုငါဘာလုပ်လဲ ??
José Enrique Benitez Barrera အားပြန်ပြောပါ
လူးဝစ်ဖာနန်ဒို Morales ဟုသူကပြောသည်
luis fernando morales အားပြန်ပြောပါ
Mario davila ဟုသူကပြောသည်
6.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ငါစွန့်စားမှုယူသင့်သည် (သို့) ကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်စေလိုသောအရာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Mario Davila ကိုပြန်ပြောပါ
သို့သော်၎င်းကို Android 6.0 သို့တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပြုလုပ်ခဲ့သောယခင်ဗွီဒီယိုကကျွန်ုပ်အားများစွာကူညီနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလမ်းကြောင်းပေးချင်ပါတယ်။
Root ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။ ၆.၀ လုံလောက်ပါပြီ။
OMAR DURAN ဟုသူကပြောသည်
android 6.0 သို့မွမ်းမံမှုနှင့်ဆဲလ်ဖုန်းပြန်လည်ဆယ်တင်ချိန်တွင်ကဲ့သို့ ၁၀ ကြိမ်အချိန်၌၎င်းသည်တည်ငြိမ်မှုရှိသည့်အချိန်၊ ငါဘာလုပ်နိုင်သလဲ။
OMAR DURAN သို့စာပြန်ပါ
၎င်းသည်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်လျှင်၎င်းသည်ပြန်လည်အမြစ်တွယ်ရန်၎င်းသည်အမြစ်တွယ်နေရန်လိုအပ်သည် (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သလဲမကြာမီပြန်လည်စတင်ရန်မရပ်တန့်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဟယ်လို။ v30d-EUR ဗားရှင်းအတွက်လည်းအလုပ်လုပ်ပါသလား။
Mauricio Forero ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနေ့။ D851 T-Movile ဗားရှင်းအတွက်သင့်တော်ပါသလား။ မရရှိလျှင်, ငါကဘယ်မှာရနိုင်သင်သိသလား ငါ D851 android 6.0 D85130D software နှင့် root လုပ်ဖို့လိုသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Mauricio Forero ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြေရှင်းချက်မရနိုင်သောပြhaveနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးထဲသို့ ၀ င်ရန်မိုဘိုင်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်အဆင့် ၁၀၀ အထိသင်ခန်းစာ ၁၀၀% ၏ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်စတင်သည့်အခါထွက်ပေါ်လာသည်။ Recovery ကို install လုပ်သည့်အခါဟုတ်ကဲ့ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ခွင့်ပြုထားတဲ့ zip ကိုငါ flash လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် volume ကိုပိတ်ပြီး Voltage နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာ (-) mobile သည် TRPW ထဲမွာ stock recovery ကိုထည့်တယ်။
Movie HD အက်ပ်ကိုအကြောင်းပြန်ပါ
ကာတွန်း HD Apk ဟုသူကပြောသည်
AutoREC Marshmallow ကိုယ်တိုင်က၎င်းမိတ္တူသည်အောင်မြင်မှုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးလိမ့်မည်
Cartoon Hd Apk သို့ပြန်သွားရန်
လိုအပ်ပါတယ်ဖိုင် download link ကို
Guuii ကြောက် ဟုသူကပြောသည်
Guuii Dread အားစာပို့ပါ
ရွယ် vlvarez ရေကန် ဟုသူကပြောသည်
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်သင် root root ကို uninstall လုပ်နိုင်ပါသလား။
Roi vlvarez Lago သို့ပြန်သွားပါ
ဟယ်လို! ဗွီဒီယိုများကကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!! ၎င်းသည်မြန်ဆန်ရိုးရှင်း။ နားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်သိချင်တာကမင်း root root ကို uninstall လုပ်လို့ရလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ဤတိုတောင်းသောသင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ အချက်မြန်ပြီးထိရောက်မှုရှိပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျ purify နှင့် autorec နှင့်အခြားသူများကို uninstall နိုင်သလားဟုမေးမြန်းသူကိုမှ ... ငါဆိုသည်ကား, ဟုတ်သည်, သင်ကသူတို့ကိုဖျက်ပစ်, ငါပြု။ ဘာမျှဖြစ်ပျက်။
အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ လုယက်ခြင်း၊ အလွဲလွဲခြင်း၊ စျေးပေါခြင်း၊ terminal ကိုကြိုးစားသူများအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိနေသေးသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်မှုပြောင်းလဲသွားခြင်းနှင့်မိုဘိုင်းကိုအမြစ်တွယ်မိခြင်းအတွက်နောင်တရသူမည်သူမဆိုအတွက်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
- imei မှနောက်ဆုံးပေါ် firmware ကိုကူးယူပါ။
- LG drivers တွေကို Download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ။
- LG FlashTool ပရိုဂရမ်ကိုကူးယူပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ကွန်ရက်ပေါ်ရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောမည်သည့်သင်ခန်းစာကိုမဆိုငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကဲ့သို့ "LG FlashTool နှင့်အတူ KDZ flashing" အကြောင်းလေ့လာပါ။ https://www.youtube.com/watch?v=fGeefuXR9w4
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ, သင်အသစ်ကကဲ့သို့ "selular" ရှိသည်။
ဒီ post ကို၏ဖန်တီးသူမှ, moltes gràciesကုမ္ပဏီ !!
ဟုတ်တယ်၊ အလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါက "permissive" ဖိုင်အစား "beta supersu" ဖိုင်ကို flashed ။ အဘယ်အရာကိုအမှုအရာမ ... (ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ် shit) ။ တောင်းပန်ပါတယ်
ငါ supersu ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပြန်လည်ထည့်သွင်းဖို့ကိုပိတ်ပြီးနောက်, သူကသာစက်ရုံပြန်လည်စတင်ပေါ်လာမသာပါဘူး
သင်က Factory Reset menu ကိုရရှိလိမ့်မယ်။ သင်ဟာအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်တော့မယ်ဆိုရင် yes လို့ပြောပါလိမ့်မယ်
Elvis ကိုယ်ကျင့်တရား ဟုသူကပြောသည်
Elvis Morales အားပြန်ပြောပါ
LG d6.9 တွင် fulmics 851 ကို install လုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအချက်ပြမှုမရှိဘဲထွက်သွားသည်။ * # 06 # MEID ???? ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲမသိဘူး Francisco Ruiz မှာမျှော်လင့်ပါတယ်
Luis Panama ကိုပြန်ပြောပါ
သူငယ်ချင်း၊ htc မှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်၊ မျှော်လင့်စရာမရှိဘူး၊ imei ဆိုတာမင်းရဲ့စက်ရုံအော်ပရေတာကပေးတဲ့ဒေတာဖြစ်တယ်၊ ဥပမာ Sprint, verizon ။ ။ imei ကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့သင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပဲသင့်ရဲ့ဆဲလ်ကိုသာရောင်းပါ။ အစိတ်အပိုင်းများ
kilver Francis fuentes garcia က ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမေးခွန်း3နှင့်အတူမှာ & t မှ lg g850 d6.0 များအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်?
kilver francis fuentes garcia သို့ပြန်သွားပါ
အရာအားလုံးအလုပ်မလုပ်ဘဲပြaနာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ မဟာဗျူဟာမရှိဘူး၊ အခြားကိရိယာတွေနဲ့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ လည်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာမင်းမသိဘူး။ root လုပ်ဖို့နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုသိလား။ အခြားခြေလှမ်းများ, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုပ်ပါ
၎င်းသည် v30d ဗားရှင်းအတွက်အလုပ်လုပ်သည်
v30d EUR ဗားရှင်းအဘို့အဆာဗာ
lg g3 d851 အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာပြောပြပါ
Erick Madrid ကိုပြန်ကြားပါ
ကောင်းပါတယ်၊ ငါနင်းစာရွက်တွေကိုစာနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဆီကိုလှမ်းလိုက်တယ်။ 4h ငါမိုဘိုင်းနှင့်တိုက်ခိုက်နေသည်။ LG ၏သွေးထွက်သံယိုအမှတ်တံဆိပ်ရှိနေသေးသည်။ twrp ကိုပြန်လည်စတင်ရန်ခက်ခဲပြီး Firmware update mode နှင့် flash tool တွင်မည်သည့်မူရင်း KDZ ကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါ့ဖုန်းက v30c ပါ။ သင့်ရဲ့သီအိုရီအရသဟဇာတမဖြစ်ဘူးဆိုတာသွားကြည့်ရအောင်။ အခုငါတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း link သည်အလုပ်မလုပ်ပါ
Francisco, ကောင်းသောမနက်မှာအမြစ်တွယ်ဖို့ဖိုင်တွေမရှိဘူး။ ငါ Twrp ကို install လုပ်ပြီ။ သူတို့ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲ။
Samsung Galaxy Note6ကိုဇူလိုင်လတွင် Android N ဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်
App Cloner ဖြင့်သင်၏ဖုန်းတွင်တူညီသောအက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုဖန်တီးပါ